musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Seychelles yekugovana Climate Insights kuCOP Kuunganidza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura
Steen G. Hansen uye muunganidzwa wake wemabhuku ezvakatipoteredza paSeychelles Climate
COP ichaunza hunyanzvi hunhu pamwechete kuti vakurukure izvo zvinofanirwa kuitwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, uye Steen N. Hansen arikuti, tanga nekuziva zviripo, uyezve chengetedza izvo zvakaonekwa kuti zviripo. Kuzvipira kwaVaHansen kwemasikirwo uye manejimendi manejimendi kunowedzerwa nekuti nharaunda yepasi rose iri pasi pekumanikidzwa zvisina kumboitika.
Izvo zvakatipoteredza zvakakwirira izvozvi pane ajenda yemunhu wese sekushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti kunzwike mumakona mana epasi.
Seychelles iri kuzvishingisa kusimbisa nyika mukuchengetedza izvo zviwi zvakakomborerwa nazvo netariro yekuti munhu wese anotevedzera.
Hansen akanyora akati wandei ekukurukurirana mapepa, maonero, uye zvinyorwa zvinyorwa nezve zvakasikwa, uye zvisikwa manejimendi.
Mutsara uzere wemabhuku ese anoenderana nei Seychelles ine sepfuma yakasarudzika munzvimbo yezvakatipoteredza yakapihwa naSteen N. Hansen, chizvarwa cheDutch chinogara muSeychelles. Ari kubatsirwa nemukadzi wake weSeychellois, Marie France, mukusundira kuzivikanwa kwebasa ravo rakareba uye rakaoma.
Hansen ndeweDanish nyika akazvarwa muna 1951. Maive muna 2015 paakatamira kuSychelles ndokuroora gore rakatevera kuSeychellois uye akapihwa kugara zvachose muRepublic of Seychelles mu2019.
Hansen anobata tenzi mune biology uye bachelor mune geography uye mune geology futi (zvese kubva kuYunivhesiti yeCopenhagen) uye muchiGerman mutauro netsika (kubva kuYunivhesiti yeOdense, Denmark). Asati asvika muSychelles, VaHansen vakashanda sachipangamazano wezve biologist uye semudzidzisi mukuru padanho rekoreji. Ainyanya kufarira kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye akanyora akati wandei mapepa ekukurukurirana, maonero, uye zvinyorwa zvinyorwa nezve zvakasikwa, manejimendi manejimendi, uye kunyangwe nezvezvinhu zvakagadzirwa nemagene.
MuSychelles, akaenderera mberi nechishuwo chake nezve zvakasikwa uye manejimendi manejimendi nekunyora yekutanga yakaratidzwa uye yakazara Flora yeSychelles kubva ku2016 (mapeji 725) pamwe nemabhuku mashoma uye ari nyore kuverenga ane hupfumi hwezvisikwa muSychelles ayo zvinogona kutaurwa Inotyisa Zvirimwa zveAride Island (2016); Vallée de Mai - Primeval Palm Forest, Natural Reserve uye UNESCO Heritage Site (2017); Inotyisa Hunhu hweCurieuse Island (2017); Iyo National Botanical Bindu reSeychelles (2018); Iyo Tea Fekitori, yayo Yemhando Trail uye Morne Blanc (2018); Le Jardin du Roi Spice Bindu (2018); Iyo National Biodiversity Center yeSeychelles (2019); uye zvazvino Le Ravin de Fond Ferdinand - Inokosha Reserve paPraslin (2021) kwaanotarisa zvisikwa manejimendi uye kuchengetedza kuchengetedza inotevera kuratidza sarudzo yemiti nemhuka.
Zvinotyisidzira, 3 zvirimwa kana mhuka zvipenyu zviri kutsakatika awa yega yega kutenderera nguva, nekuda kweichi chikonzero "isu tiri pamucheto kuve wekutanga mhuka kugona kunyora kuparara kwedu kana pasina danho ratorwa izvozvi" (Dr. Christiana Pasca Palmer, UN Executive kune Biodiversity). Uye nzira chete yekubuda nayo, kutevera Mr. ake mazwi - ingori diki uye inozvininipisa mupiro.